Momba anay | Kylin Manufactory
Hatramin'ny 1995, ho mpanamboatra fahazoan-dàlana, mivantana ary matihanina ao Shina, Kylin Manufactory dia lasa iray amin'ireo orinasa mitarika ao amin'ny indostria. OEM / ODM mpanamboatra sy mpanondrana manokana amin'ny famokarana lalao filalaovana, kilalao karatra, karatra filalaovana, singa lalao, afisy velvet, paosy fonosana ary kojakoja ilaina. Manamboatra orinasa famokarana efatra izahay; fanontana, hazo, vola madinika & plastika.
Miara-miasa amin'ny orinasa maherin'ny 10 izahay faritra orinasa mpanao fanamboarana sy fanondranana vokatra lalao 1 tapitrisa isan-taona. Avy amin'ny tovona pui- mamaritra ny fitaona ho avy mialohan'ny aôrisitry ny endriky ny atao, ny fototeny böt; ny tovana -of izay mamaritra ny mpanao (mpanao fahatelo amin'ny bika ambehivavy); ary ny tovana -s mamaritra ny ploraly Ny solosainantsika manara-penitra, ny fitaovana fanaovan-gazety mialoha ary ny milina fanontam-pirinty dia havaozina tsy tapaka mba hifanaraka amin'ny teknolojia farany amin'ny indostrian'ny fanontana sy ny fonosana hahafahantsika mahazo antoka fa ny asa manana kalitao avo indrindra ihany no vokarintsika.
Ny Sampan-draharahan'ny Filming anay dia miaraka amina processeur plate automatique, frame fampiasa, mpanonta pirinty, sarimihetsika totohondry, ary lovia punch PS. Isika rehetra dia aorian'ny fitaovana fanaovan-gazety toy ny milina fanindriana boky, laminatoran'ny carte de crédit, milina fanosotra sy fanapahana, milina fanapahana ho azy, milina famafana, masinina fanapahana zoro herinaratra, PP Laminator, milina fandefasana solika mandalo solika UV, milina fanaratsiana, sns. .Ny ozinina plastika ananantsika dia misy milina fanindronana 10 misy fahaiza-manao samihafa. Manana departemanta OEM miaraka amin'ireo teknisianina manam-pahaizana manokana izahay amin'ny fampivoarana ny vokatra ary koa ny fanontam-pirinty sy ny famafazana azy manokana.
Serivisy mifandraika amin'izany izay azonay omena dia ny famoronana fanesoana, sary ara-teknika, fisie 3D ary famolavolana tsindrona. Misy maherin'ny 500 ny lasitra fanindronana ao amin'ny atrikasanay mba hamokarana saika ny karazana lalao rehetra mifandraika amin'ny indostrian'ny lalao. Manokana izahay amin'ny famokarana backgammon, roulette ary ny kojakoja rehetra ao aminy. Ny vokatra plastika, hazo ary vy manokana dia misy noho ny zavatra niainantsika lehibe teo amin'ny sehatry ny famolavolana tsindrona plastika, famonoana maty, fananganana fipoahana, famolavolana maloto, fananganana banga, famokarana acrylic, fanontana hafanana, silkscreen, fanontana lamba, fanontana mafana , plating vacuum ary maro hafa.
Mino izahay fa ny fifandraisana mahomby eo amin'ny mpamokatra sy ny mpanjifa dia miankina amin'ny fahamendrehana sy ny fahitsiana. Ny fanarahana akaiky an'io fitsipika io dia ahafahantsika mihaona tsy tapaka sy mihoatra ny vinan'ny mpanjifanay. Izy io koa dia mitazona ny mpanjifanay hiverina bebe kokoa.
Ny tombony manokana ananantsika dia ny vidiny sinoa tena izy sy mivantana, vokatra tsara sy azo antoka, fifandraisana manokana ary andraikitra lehibe ary amin'ny fandefasana fotoana.
Kylin Manufactory mandray tsara ireo mpanjifa vaovao sy taloha, mpanjifa anatiny sy ivelany hitsidika sy hanara-maso ny orinasanay.
Ny fitsipiky ny fitarihana dia manome fahatokisana, fahamarinana, fiaraha-miasa ary fitsaboana ara-drariny ho an'ny mpanjifa rehetra amin'ny alàlan'ny maha-orinasa tsara anay amin'ny sehatry ny famokarana matihanina. Manokana ny tenanay izahay amin'ny fanatsarana hatrany ny fizotranay, ny vokatra ary ny serivisinay.